BWC011 - OMG WIFI / GPS / 4G Camera (fantsom-pifandraisana mafana) - Solika OMG
Ny fakantsarin'ny fakantsary dia fitaovana portable izay afaka manoratra horonantsary sy feo. Ny fitaovana dia afaka mandefa ny horonan-tsary sy feo miaina amin'ny 3G na 4G ihany koa, manaraha na mandeha amin'ny GPS. Ny fitaovana dia manana TFT monitor sy ny bokotra eo aminy ary ny mpampiasa dia afaka mampiasa ilay fitaovana mora foana. Ny fakantsarin'ny fakantsary dia ampiasain'ny polisy, mpiambina, ary ny mpiandraikitra ny fampiharana lalàna.
- Ny mpampiasa dia afaka mahazo lahatsary sy feo mivantana amin'ny 3G, 4G na WiFi,
- Ny mpampiasa dia afaka mijery mivantana ny fitaovana amin'ny alàlan'ny GPS natsangana ao amin'ny fitaovana. Ny tahiry GPS dia ho raketina ao amin'ny rakitra an-tsoratra amin'ny feo sy feo, ka ny mpampiasa dia afaka mahazo ny fampahalalana ny toerana ao amin'ny rakitsoratra.
- Ampiasao ny lithium batterie ho an'ny herinaratra. Ny fitaovana dia afaka manoratra tsy tapaka mandritra ny ora 12 miaraka amin'ny batterie 2.
- Fandefasana sehatra fitehirizana 32G. (64G ~ 128G fakàna tahirin-kevitra fanampiny)
- Vita amin'ny sary 4 tapitrisa pixel, manohana ny firaketana amin'ny famolavolana 1080P, 720P na D1, fanohanana ny sary amin'ny pixel 40 tapitrisa, sary 32 tapitrisa ary pixel 2 tapitrisa.
- Tohano IR. Tohano ny fanoratana amin'ny alina.
- Ny anaran'ny rakitra dia manana fampahalalana momba ny daty, ny fotoana, ny karazan-tsoratra, izay mahatonga azy ho mora kokoa amin'ny fitadiavana sy ny antontan-taratasy.
- Ny mpampiasa dia afaka mijery, mikaroka ary mamaky ireo rakitra ao amin'ny fitaovana.
- Tohano ny bokotra pania. Azonao atao ny mandefa ny alam-baova-panandramana mba hanaraha-maso ny 3G / 4G.
- Ny firaketana ny firaketana dia mahatonga ny porofo ho azo antoka kokoa.
- Ny fitaovana dia afaka maneho ny ID, ny mpampiasa, ny daty sy ny ora.
- Ny fitaovana dia afaka mampiseho fampahalalana momba ny fampiasana batterie, ny famandrihana, ny fotoana sy ny efitranon'ny fahatsiarovana. Ny fitaovana dia manondro mazava ny herinaratra, horonantsary na horonantsary. Ny hazavana maitso dia manondro ny herinaratra, ny hazavana mena dia manondro ny fandraketana ny horonan-tsary, ny hazavana mavo dia manondro ny firaketana an-tsoratra
- Ny fitaovana dia afaka mitatitra ny fanairana amin'ny andro iray, tafiditra ao anatin'izany ny fanairana ho an'ny baomba mandaitra, tsy ampy fanairana efitrano fahatsiarovana.
- Apetaka ny rakitra. Fitaovana misy hetsika misy lozisialy izay misy ny herinaratra / onjam-peo, horonan-tsary, horonam-peo, sary, GPS status fixed, 3G / 4G ary fifandraisana WiFi.
Dewarp: Tohano ny dewarp mba hahatonga ny sary ho marina sy azo antoka
BWC011 - OMG WIFI / GPS / 4G Camera (fantsom-pifandraisana mafana) no farany niova: Aogositra 14th, 2020 by Admin